Wado - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Jid)
Wado (Af Ingiriis : road) sidoo kale loo yaqaano Jid, waa dariiq ama meel ka mid ah dhulka oo la simay isla markaana laga dhisay laami ama sibidh si turxaanta looga ilaaliyo. Wadooyinku waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadku isticmaali jireen tan ilaa horaantii ilbaxnimada. Wadooyinka waxaa isticmaala dadka, gaadiidka, baaskiiladaha, xoolaha iyo wixii la xidhiidha.
Laami la samaynayo
Laami waa aalad la dulsaaro meelo ka mid ah oogada dhulka, si looga sameeyo wado siman oo dadka ama gaadiidku ku dulsocon karaan si sahal ah. Sida ugu badan laamiga waxaa laga sameeyaa quruurax (dhagaxaan la jajabshey), sibidh, dhoobo iyo gaamur la iskuqasay. Meelaha qaar laamiyada waxaa laga sameeyaa sibid iyo jaajuur la iskudhex laaqay.
Jidka Dukhan Highway ee dhexmara Dooxa iyo Dukhan, wadanka Qatar.
ee dhexmara Mishigaan, wadanka Maraykanka
Wadoweyn sidoo kale loo yaqaano Jid, waa meelo la simay oo dadka ka dhexeysa taasi oo loo isticmaalo socdaalka. Wadooyinka waaweyn waxay ka samaysan yihiin dhowr haad (qaarkood ilaa 10 haad) oo u kala socda labo jiho oo lid isku ah. Inta ugu badan wadooyinka waaweyn waxay ka xidhan yihiin dadka lugeynaya, baaskiiladaha iyo aqalada si loo ilaaliyo amniga dadka. Sidoo kale waxay leeyihiin meelo loo isticmaalo nasiimada iyo xaaladaha degdega ah. Dhinaca kale, wadooyinka waaweyn waxay isku xidhaan deegaano badan oo kala duwan.
Jidweyn dhexmara waqooyiga Ingiriiska
Wadoweyn dhexmarta wadanka Jarmalka
Wadoweyn dhexmarta Hindiya
Wadooyin waaweyn dhex mara Maraykanka
Ontario Highway 401, Kanada.
King Faisal Highway, Baxrayn
Jidweyn dhexmara Israaiil
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wado&oldid=162688"
Last edited on 15 Oktoobar 2016, at 13:28
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Oktoobar 2016, marka ee eheed 13:28.